SPY164 - OMG Wifi Kamera miafina Bluetooth Speaker - Vahaolana OMG
Real Bluetooth Speaker Function: Mpanatontosa bluetooth miaraka amin'ny fakantsary HD mini namboarina, tsy misy olona hahatsapa fa fakantsary izany, afaka mahita tsara izay nitranga ianao raha tsy tao an-tranonao, na birao, orinasa, na mila toerana azo antoka.
1080P HD Video: Ny horonan-tsary 1920 x 1080P, azonao jerena tsara ny zava-mitranga amin'ny alalan'ny video. Ampidirina amin'ny batterie batterie 2000 mAh.
Wifi Music Play Play: P2P IP Camera Fanaraha-maso Wifi Connexion, Fanohanana ny fijerena horonantsary real-time, horonantsary Recording, sary fitifirana, fiarovana ny piratahanao, Manampy ihany koa ny sary amin'ny alàlan'ny alàlan'ny Smartphone APP (ios na android) na aiza na aiza.
Fanairana Fanaraha-maso Motion: App Video Real-Time Fanaraha-maso Fanaraha-maso ho an'ny Home Security, mahazo fampahalalana momba ny fihetsiketsehana rehetra ao an-tranonao, Rehefa mametraka ny asa atao dia alefaso amin'ny alàlan'ny sary ny sary amin'ny hetsika amin'ny fitaovana fampifandraisanao ifantohana.
Loop Video Recorder: Ny firaketana an-tsoratra dia manitsy ny rakitra tranainy indrindra raha toa ka mahafeno ny fahatsiarovan-drakitra, fotoana kely fotsiny amin'ny PC mba hampisehoana ny mari-pamantarana mariana amin'ny horonan-tsary sy sary, Manohana ny 128GB (Tsy tafiditra ao anatiny), manomboka ny tahiry voalohany rehefa feno ny toerana.
IZAY AZO AMPIASAINA AO AMIN'NY FITANTANANAO AO AMINAREO:
1. Ny fakantsary Bluetooth ary Wifi ny asa dia mahaleotena.
2. Manohana ny tambajotra 2.4G izy, fa tsy manohana ny tambajotra 5G.
3. Ho an'ny fampiasam-bola maharitra, manoro hevitra anao izahay mba hitazona izany famandrihana izany mandritra ny fanoratana.
Ity fakantsary ity dia ho an'ny zazakely, biby fiompinao, mpitaiza anao ary ny mpiasanao. Na mila miaro ny tranonao sy ny olon-tianao ianao dia tandremo ny zavatra rehefa tsy eo ianao. Azonao atao ny mampiasa ny telefaona, takelaka na solosainao hidirana amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza
P2P IP Camera Fanaraha-maso Wifi Connexion, Fanohanana ny fijerena horonantsary real-time, horonantsary Recording, sary fitifirana, fiarovana ny piratahanao, Manampy ihany koa ny sary amin'ny alàlan'ny alàlan'ny Smartphone APP (ios na android) na aiza na aiza.
Ny fahitana alina hatramin'ny 20ft ao anatin'ny maizina, IR vision ny alina dia mandeha tsara kokoa rehefa ampandoavina ny vondrona. Ny jiron'ny infrarorata namboarina dia mamela mazava tsara ny haavon'ny haavon'ny haavon'ny haavony fa ny jiro iraisam-pirenena manokana dia tsy hita maso amin'ny maso olona, ​​ary tsy manadino na oviana na oviana.
Wireless Bluetooth gazety
Ampifandraiso amin'ny telefona na solosaina amin'ny alalan'ny bluetooth ilay mpandahateny. Afaka mankafy mozika mahafinaritra ianao.
Ny firaketana ny Loop dia mampiditra ny rakitra tranainy indrindra raha toa ka feno ny fitadidiana. Tsy ho diso zavatra mihitsy ianao na dia feno aza ny fitadidiana.
Manohana ny kara-pamokaram-bokatra bitika 128GB micro SD (ny SD SD dia tsy tafiditra ao anaty boaty), ny lahatsary dia azo henoina ao amin'ny rindrambaiko App sy PC.
SPY164 - Lahatsary Wifi Bluetooth Speaker
5737 Total Views 1 Views Today